Logitech MK240 Nano Wireless Keyboard and Mouse Combo (White)-22 ~ ICT.com.mm
HomeLogitech MK240 Nano Wireless Keyboard and Mouse Combo (White)-22
Logitech MK240 Nano Wireless Keyboard and Mouse Combo (White)-22
Warranty:3Years Full-size ကီးများ ထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် စာစီစာရိုက်မြန်ကန်ပြီး ကီးဘုတ်၏ အနိမ့်အမြင့်အား ချိန်ညှိနိုင်သလို နေရာစားသက်သာရန်အတွက်လည်း လှပသေသပ်စွာ ဒီဇိုင်းဖော်ထားသည့် Logitech အမှတ်တံဆိပ်ကီးဘုတ်ဖြစ်သည်။ အလတ်စားအရွယ် မောက်စ်တစ်လုံးပါဝင်ပြီး HD optical tracking – 1000 dpi ရှိသည့်အတွက် ချောမွတ်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်အားချိတ်ဆက်ရန်အတွက် သေးငယ်သည့် USB receiver တစ်ခုပါဝင်ပြီး 10 မီတာအကွာအဝေးထိ... [Learn more]
Brand: LogitechFilter by: Color Star, CVM, Keyboard & Mouse Combo, USD
Full-size ကီးများ ထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် စာစီစာရိုက်မြန်ကန်ပြီး ကီးဘုတ်၏ အနိမ့်အမြင့်အား ချိန်ညှိနိုင်သလို နေရာစားသက်သာရန်အတွက်လည်း လှပသေသပ်စွာ ဒီဇိုင်းဖော်ထားသည့် Logitech အမှတ်တံဆိပ်ကီးဘုတ်ဖြစ်သည်။ အလတ်စားအရွယ် မောက်စ်တစ်လုံးပါဝင်ပြီး HD optical tracking – 1000 dpi ရှိသည့်အတွက် ချောမွတ်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်အားချိတ်ဆက်ရန်အတွက် သေးငယ်သည့် USB receiver တစ်ခုပါဝင်ပြီး 10 မီတာအကွာအဝေးထိ လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ Auto-sleep Mode နှင့် On/Off ခလုတ်ငယ်တစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
36-month battery life, Adjustable keyboard height, Spill-resistant design, 2.4GHz wireless (10 meters), Nano USB receiver12-month battery life, On/off power button, Contoured compact shape, High-definition optical tracking (1000 dpi), Smooth, responsive cursor control
Typing is fast and fluid with full-size keys inafamiliar yet space-saving layout, with adjustable tilt legs for typing comfort.The mid-sized mouse is shaped to fit your hand and features smooth cursor control with high-definition optical tracking (1000 dpi).
36-month keyboard and 12-month mouse battery life - plus auto-sleep and on/off switch. The keyboard is spill proof and built to last.